Waqtiga waa la badalayaa | Somaliska
Sida ay la socdaan dadka ku nool Sweden, saacada dalka ayaa la badalaa 2 waqti ayadoo marna lagu daro 1 saac marna laga jaro. Habeenka Axada 27 Maarso ayaa 1 saac lagu darayaa waqtiga Sweden, ayadoo saacada marka ay tahay 2:00pm is badalka la sameynayo oo laga dhigayo 3:00pm. Saacada ayaa laga jaraa Habeenka Axada ugu dambeysa ee bisha Oktobar taasoo ku beegan 30, Oktoobar, 2011 ayadoo marka saacada ay tahay 3:00pm laga dhigi doono 2:00pm. Arintaan ayaa aad muhiim ugu ah in ay ogaadaan dhamaan dadka ku nool Sweden ayadoo tani saameen wayn ku yeelanaysa saacadaha shaqada, iskuulada , tareenada iyo dhamaan qaybaha nolosha. Hadaba ha iloobin in aad waqtigaaga ku darto 1 saac, maalinta Axada ee bisha ku beegan tahay 27, Mars. Kombuyuutarada ayaa iskood isugu dari doona saacada. isbedelka lagu sameeyo waqtiga ayaa markii ugu horeysay Sweden laga dhaqan galiyay 15 May 1916, ayadoo dadku aad ugu soo horjeestaan waqtigaas. Isla sanadkaas bishii September ayaa la iska dhaafay. 16kii April 1980 ayaa dib loo bilaabay isbedelka waqtiga ayadoo ilaa iyo hada sidaas lagu waday.
Sida ay la socdaan dadka ku nool Sweden, saacada dalka ayaa la badalaa 2 waqti ayadoo marna lagu daro 1 saac marna laga jaro. Habeenka Axada 27 Maarso ayaa 1 saac lagu darayaa waqtiga Sweden, ayadoo saacada marka ay tahay 2:00pm is badalka la sameynayo oo laga dhigayo 3:00pm.
Saacada ayaa laga jaraa Habeenka Axada ugu dambeysa ee bisha Oktobar taasoo ku beegan 30, Oktoobar, 2011 ayadoo marka saacada ay tahay 3:00pm laga dhigi doono 2:00pm.
Hadaba ha iloobin in aad waqtigaaga ku darto 1 saac, maalinta Axada ee bisha ku beegan tahay 27, Mars. Kombuyuutarada ayaa iskood isugu dari doona saacada.
isbedelka lagu sameeyo waqtiga ayaa markii ugu horeysay Sweden laga dhaqan galiyay 15 May 1916, ayadoo dadku aad ugu soo horjeestaan waqtigaas. Isla sanadkaas bishii September ayaa la iska dhaafay.
16kii April 1980 ayaa dib loo bilaabay isbedelka waqtiga ayadoo ilaa iyo hada sidaas lagu waday.
Salan Qali ah Dhaman bahda Somaliska.com
Waa mid muhim ah in uu qof walbo barto. Hadhoow intuu dhihi lahaa la ima shegin mana maqlin. mana arkin
Mahadsanidin aan la socono webbka Somaliska.com si qof walbo uu u gaaro hurumar iyo in uu la qabsado waxa Swedan ka jiro. Mahadsanidin